Maitiro ekumisikidza kana kuremadza iyo Dashibhodhi mu macOS High Sierra | Ndinobva mac
Mumakore achangopfuura, uye nekuona budiriro diki yayaive nayo pakati pevashandisi, Apple yakabvumira iyo Dashibhodhi kuti ishandiswe natively, iyo skrini inoratidzirwa seimwezve desktop pakuteedzana nemawidgets ane ruzivo nezve mamiriro ekunze, karukureta, kukosha kwezvikamu, kutaurirana, makarenda ...
Kutenda kuDashboard isu tinogona kurumidza kuwana majeti / maapplication izvo zvavanotiratidza pasina kufanira kuvhura vakazvimiririra. Kunyangwe zvakadaro, iwe ungasazviziva iwe waona kuti iyo Dashibhodhi yakava sei chikamu che desktop yako uye hauna asi hauna kana kana diki diki yekuishandisa.
Kuti uwane iyo Dashibhodhi isu tinongofanirwa kumisikidza Mission kudzora uye enda kune yekutanga desktop, iyo desktop yekutanga ndiyo iri chaizvo iyo Dashibhodhi uko kune ese majeti anotibvumidza kushandisa system. Asi nekusvika kwemajeti kunzvimbo yekuzivisa, iyo Dashibhodhi yakamira kuve nemanzwisisiro ayo pakutanga. Kana isu takazvimisikidza netsaona kana nemaune, pazasi tinokuratidza maitiro atingaite ekumisikidza zvachose.
Gonesa kana kudzima iyo Dashibhodhi mu macOS High Sierra
Kunyangwe ichi chidzidzo chakanangidzirwa kune vashandisi vechazvino vhezheni yemacOS inowanikwa pamusika, High Sierra, mune dzakapfuura shanduro matanho ekutevera akada kufanana.
Chekutanga pane zvese zvatinoenda Zvido zvemaitiro.
Tevere tinoenda ku Mission Control
Mukati meMission Control, takasimudza musoro Dashboard uye tinya pane rinodonhedza bhokisi kusarudza iyo sarudzo Yakabviswa. Izvi zvichanyangarika zvachose kubva kuMission Control.
Kana isu tichida kuishandisa, isu tinongofanirwa kusarudza Se space o Sekufukidza Pakati pesarudzo dzakaratidzwa mumenyu inodonhedza uko kwatakatosarudza Akaremara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Maitiro ekugonesa kana kudzima iyo Dashibhodhi mu macOS High Sierra
Apple AirPods yaizogashira chitupa chekudzivirira mvura uye iro basa "Hei Siri"